एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयर किन्दै हुनुहुन्छ भने हेर्नुहोस् कम्पनी विश्लेषण | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयर किन्दै हुनुहुन्छ भने हेर्नुहोस् कम्पनी विश्लेषण
मुख्य खबर, लगानी 113 views
एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयर किन्दै हुनुहुन्छ भने हेर्नुहोस् कम्पनी विश्लेषण
एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीले चालू आव २०७४/७५ को दोस्रो त्रैमासमा रू. ७ करोड ८५ लाख नाफा कमाएको छ । यो अघिल्लो आवको तुलनामा ६ प्रतिशतले बढी हो । कम्पनीले गत आवको दोस्रो त्रैमासमा रू. ७ करोड ३७ लाख नाफा कमाएको थियो । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ५१ करोड २३ लाख रहेको छ । कम्पनीले जगेडा कोषमा रू. १७ करोड ७५ लाख छुट्याएको छ भने बीमा कोषमा रू. ६२ करोड ६ लाख जम्मा भएको छ । पुस मसान्तसम्ममा कम्पनीले रू. ७३ करोड बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । साथै कम्पनीको फागुन ३ गते सम्पन्न वार्षिक साधारण सभाले २५ प्रतिशत बोनस शेयर र १ दशमलव ३१५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । २५ प्रतिशत बोनस शेयरपछि कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ६४ करोड ४ लाख पुग्नेछ । यस पछि पनि बीमा समितिले तोकेको पूँजी नपुग्ने देखिन्छ । बीमा समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीको पूँजी रू. १ अर्ब पुर्‍याउन निर्देशन दिएको थियो ।
पछिल्लो व्यापार मूल्यः रू. ८२०
५२ हप्ताको उच्च व्यापार मूल्यः रू. २४००
५२ हप्ताको न्यून व्यापार मूल्यः रू. ५००
१८० दिनको औषत व्यापार मूल्यः रू. १२२९.८१
अध्यक्षः बिमल प्रसाद वाग्ले
कार्यबाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतः सुनिल बल्भव पन्त
प्रधान कार्यालयः पानीपोखरी लाजिम्पाट, काठमाडौं
शाखा, उपशाखा र क्षेत्रिय कार्यालय सहितः ४०
स्टक स्टिकरः एनएलजी
चुक्तापूँजीको तुलनामा खुद नाफा १४ दशमलव ३९ प्रतिशतबाट बढेर १५ दशमलव ३२ प्रतिशत पुगेको छ । कम्पनीको दीर्घकालीन लगानी तथा कर्जा ९ प्रतिशत बढेर रू. ३८ करोड ५ लाख पुगेको छ । कम्पनीले महाविपत्ती कोषमा रू. ४ करोड २१ लाख छुट्याएको छ ।
कम्पनीले रू. १३ करोड १४ लाख आम्दानी गर्दा रू. ५ करोड २८ लाख खर्च भएको छ । कम्पनीको खुद चालू सम्पत्ती रू. ९५ करोड ६९ लाख रहेको छ । यो अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा २५ प्रतिशतले बढी हो ।
कम्पनीको जारी रहेको बीमालेखको सङ्ख्या ८३ हजार ७ सय ४३ रहेको छ भने नविकरण गरिएको बीमा लेखको सङ्ख्या १३ हजार रहेको छ । कम्पनीको स्तरीय सेवाका कारण बीमितहरुको विश्वास हासिल गर्न यो कम्पनी सफल भएको छ । यसैले गर्दा कम्पनीको बीमा व्यवसाय उल्लेखनिय रुपमा निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको छ । फलस्वरुप कम्पनीको मुनाफा वृद्धि भई लगानी कर्ताहरुलाई बढीभन्दा बढी प्रतिफल दिन सफल भएको वित्तीय विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।
कम्पनीले २ हजार २३ जनालाई रू. ३२ करोड ७७ लाख दावी भुक्तानी गरेको छ भने १ हजार ८ सय ८१ जनालाई रू. ७६ करोड १६ लाख दावी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । कम्पनीले अगामी दिनमा सबै क्षेत्रहरुमा अझ बढी सेवा विस्तार गर्दै जाने रणनीति लिएको छ ।
कम्पनीको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार प्रतिशेयर आम्दानी रू. ३० दशमलव ६६, मूल्य आम्दानी अनुपात ४४ दशमलव ५३, तरलता अनुपात १ दशमलव ७८, र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. २ सय ६४ दशमलव ०३ रहेको छ । बुधवारको शेयर मूल्य नेटवर्थको ३ गुणा छ ।
खरीद चापः कम्पनीको बुधवार भएको शेयर कारोबारको अन्तिम समयसम्ममा बिक्री चापको तुलनामा खरीद चाप १० गुणा बढी रहेको छ । सो अवधिसम्म ३ हजार ८ सय ९७ कित्ता शेयर खरीद र ३ सय ८२ कित्ता शेयर विक्रि गर्ने माग रहेको थियो ।
१० जनवरी २०१८ १० अप्रिल २०१८
मैनबत्ती बिश्लेषणः कम्पनीको ५६ दिनको कारोबार अवधिको अन्तिम दिनमा सेतो मारोबोजु आकृती बनेको छ । यस आकृतीले कम्पनीको शेयर मूल्य आगामी दिनमा बढ्ने सङ्केत देखाउँछ ।
आरएसआईः कम्पनीको ५६ दिनको करोबारमा न्यूट्रल जोन (४७ दशमलव ८५ स्केल)मा छ । यसले खरीद विक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ ।
स्ट्याण्डर्ड डेभिएशनः कम्पनीको ५६ दिनको कारोबारमा १३ दशमलव ७९ विन्दुमा छ । यसले उतारचढाव सामान्य रहेको छ ।
मुभिङ एभरेजः कम्पनीको ५६ दिनको कारोबारमा २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने मूल्यरेखा एकआपसमा टाढिएका छन् । हालको मूल्य १४ दिने मूल्यरेखा र २६ दिने मूल्यरेखाभन्दा माथि छ । हालको मूल्य रू. ८ सय २० देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई मूल्य महङ्गिएमा रू. ८ सय ३० मा प्रतिरोध पाउछ भने सस्तिएमा रू. ८ सय ७ मा टेवा पाउन सक्छ ।